Sirjana ….. – केहि गन्थन मन्थन र विचारहरु
| Limbu |
मेरो मोबाइल एडिक्सन र त्यसलाई छुटाउने मेराे उपाय
विगत दुई महिना देखि मैले व्लग अपडेट गरेको छैन । तपाईहरुलाई लाग्ला म एकदमै व्यस्त थिए तर त्यसको ठिक उल्टो अवस्थामा थिए । कुनै काम सिध्याउने हतारमा थिइन, न त केहि लेख्ने तरखरमै थिए । लेख्न पर्ने धेरै थियो तर लेख्नलाई दिमाग चलरिहेको थिएन, दिमाग चलेको बेला हातले अल्छि गथ्र्यो (बेला बेला मलाई यस्तो पनि हुन्छ) । त्यसो भए म के गरिरहेको थिए, भन्ने लागेको होला तपाईहरुलाई । फुर्सदको समय भए पनि म एकदम बेफुर्सदिलो थिए । यस समयमा म दुईवटा कुराहरु गरिरहेकी थिए । पहिलो, सिरियल हेर्ने र दोस्रो, गेम खेल्ने । अनि बेलाबेलामा फेसबुक, इन्ष्टाग्राम हेर्ने र च्याट गर्ने । त्यो सब मोबाइलमै । यसरी अत्यधिक समय मोबाइल हेरेर बिताइरहेकी थिए ।
मैले गेम खेल्ने बानी राम्रो होइन भनेर त्यो छाड्न खोजे । गेम खेल्न छाडे तर इन्ष्टाग्राम हेर्न थाले अनि पिनट्रेसमा आफूलाई मन पर्ने कुराहरु पिन गर्न थाले । सिरियल पनि त्यत्तिकै हेर्न पर्ने । मलाई लाग्यो म सिरियलको भोगी छु, त्यसलाई छाड्नु पर्छ । त्यसलाई केहि दिन हेर्दिन, सक्छु कि सक्दिन भनेर आफैलाई टेष्ट गरे । केहि दिन सिरियल नहेरीकन पनि बस्न सके । तर सिरियल हेर्ने समयमा मैले युट्युवमा विभिन्न विषयका पोडकाष्ट र डकुमेन्ट्रीहरु हेरे । मैले मेरो आफ्नो बानीलाई नियालेर हेरे । खासमा मलाई मोवाइल गेम, नेटफिक्स, युट्युब केहिको पनि तल रहेनछ । खासमा तल त मोबाइलको रहेछ । यसो गऱ्यो, उसो गऱ्यो अन्तमा हात र आँखा मोबाइल मै जाने ।
केहि समय अगाडि युभल नोभा हरारेको एउटा अन्र्तवार्ता हेरेको थिए । उनले अहिले मान्छेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको पट्याईसंग जुध्नु हो भनेका थिए । साँचै नै, पट्याई लाग्यो कि मोबाइ समाउने कारण मोबाइल एडिक्सन भएको छ । गर्नका लागि धेरै काम–कुराहरु छन् तर पनि सजिलो र सुलभ भनेकै स्मार्ट फोन भएको छ । संसार त्यहि देखिने – आफूले खोजेको, सोचेको, कल्पना गरेको संसार र मान्छेहरु सबै त्यहॉ भेटिने/देखिने । हरारेले त्यहि अन्र्तवार्तामा नेटफिक्सको सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्दी निन्द्रा हो भनेका पनि थिए । जुन कुरा मसंग एकदमै मिल्छ र सायद अरुसंग पनि मिल्छ होला । वितेका दिनमा सिरियल हेर्ने क्रममा मैले धेरै रातका निन्द्रा बिगारेको थिए । रातको दुई त सामान्यतया बजाउने र कुनै कुनै रात सिरियल हेर्दा हेर्दै बिहानको पॉच पनि बजाएको छु । यस क्रममा निन्द्रा मात्र होइन, स्वास्थ्य र ऑखा पनि बिगारेको छु । निन्द्रा प्यारो वा नेटफिक्स? भनेर कसैले सोधिहाले नेटफिक्स भन्न पनि सकिने अवस्था आउने रहेछ ।
photo: illustration by Stephan Schmitz and downloaded from http://www.mymodernmet.com
मेरो बाबा–आमाले “अत्ति” केहि पनि राम्रो हुँदैन भनेर सानोमा सम्झाउनु भएको याद आउँछ । जे पनि अति गर्‍यो भने दु:ख पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो । अरुको के उदाहरण दिन आफै अगाडि हुँदाहुँदै । एउटा (कु)लतको कारण आफैले आफ्नो स्वास्थ्य र आँखा बिगारेको अवस्था छ । स्वास्थ्यमा त असर गर्‍यो नै अर्को तिर बच्चाहरु पनि त्यस्तै बन्दै गइरहेका छन् । अनलाइन क्लासका कारण उनीहरुको हातमा माृबाइल र ट्याबलेट छ । अनलाइन क्लास शुरु हुनु अघि र पछि पनि उनीहरुसंग मोबाइल र ट्याबलेट रहिरहन्छ जसको कारण उनीहरु पनि बिस्तारै यसको लतमा परिसकेका छन् । मेरो छोरीलाई पनि यसको लत लागिसकेको छ । तर मलाई उसलाई त्यो नसमात/नहेर भन्ने ऑट आउँदैन किनभने म आफै त्यसको लतमा छु । आफू चाहि सधै मोबाइल हरेर बस्ने अनि बच्चालाई त्यो नगर, राम्रो बानी होइन कसरी भन्ने? यस्तो भन्न मेरो नैतिकताले दिदैन । यिनै दुई कारणहरुले गर्दा मैले पहिले मोबाइलको लत छुटाउनु पर्ने छ । जब घरका ठूला मान्छेहरु सहि बाटो पछ्याउछन्, बच्चाहरु स्वत त्यहि बाटो पछ्याउछन् । उनीहरुले ठूला मान्छेबाटै सिक्ने हुन् ।
मोबाइल एडिक्सन छुटाउनको लागि मैले फोनको डिजिटल वेलविइङ्गमा गएर ए्याप टाइमर राखे । दिनमा कति समय नेटफिक्स, फेसबुक्स, इन्ष्टाग्राम हेर्ने भनेर समय तोकेर राखे । समय सकिएपछि त्यो ए्याप चल्दैन र त्यो चलाउन सकिन्दैन । आफ्नो आवश्यकता अनुसार ५ मिनेट देखि १ घण्टासम्म चलाउने गरी टाइमर राखे । १–२ दिन त राम्रैसंग त्यसलाई माने तर सिरियल आधामा कहाँ छाड्ने, इपिसोड सकिन लागेको छ भनेर टाइमरमा टाइम थप्दै हेर्न थाले । गेम खेल्दा यो एउटा पडाव पार गरेर छाड्छु भन्दै, त्यहाँ पनि समय थप्न थाले । बिस्तारै त्यो ए्याप टाइमर को काम नै भएन । अनुशासन मान्ने मान्छेको लागि त्यो कामलाग्दो प्रोग्राम होला तर म जस्तोको लागि होइन भन्ने थाहा भयो ।
त्यसपछि ती ए्याप नै डिसेवल र डिलिट गर्ने निधो गरे । फेसबुक डिसेबल त गरे तर साथीभाई, आफन्त र विद्यार्थीहरु सबै फेसबुकबाट सम्पर्कमा रहने हु‘दा त्यो धेरै दिनसम्म डिसेबल गरीरहन सकिन । गेम पनि डिलिट गरे तर कतिपय कुर्नुपर्ने ठाउ‘मा जान्दा गेम भयो भने समय कटाउन सजिलो हुने रहेछ भनेर त्यसलाई पनि फेरी राखे । नेटफिक्स पनि डिसेबल गरेको थिए फेरी पैसा तिरेर किनेको प्रोग्राम केहि त उपभोग गर्ने पर्छ नी भनेर त्यो पनि फेरी इनेबल गरे । यो तरीका पनि काम गरेन ।
चूनौती त ज्यू का त्यू रह्यो । अब के गर्न राम्रो हुन्छ ? कसैले भनेको याद आयो मलाई । जुन चिजलाई जति छोयो त्यसको त्यत्ति नै माया लाग्छ । अनि माया गरेर छोएको चिजको त झनै माया लाग्छ । अनि सधै माया गरेर छोइन चिज भनेको मोबाइल फोन नै हो । झर्छ कि, फुट्छ कि, बिग्रिन्छ कि, मैलो लाग्छ कि भनेर समाउने, पुछ्ने अनि सधै त्यस्को स्क्रिन औंलाले छोइराख्ने । जहाँ जॉदा पनि संगै लैंजाने । अरु कसैलाई नलैजाने चर्पिमा समेत मोबाइल लैजान्छौ हामी । भनेपछि मोबाइल कति प्रिय छ हाम्रो । त्यसैले मेरो मोबाइल एडिक्सन हटाउने अन्तिम उपाय भनेको मोबाइललाई नछुने हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई । त्यसपछि मैले मोबाइललाई आफ्नो छेउमा नराख्ने, सकेसम्म कम छुने र अन्य काममा आफूलाई अलमल्याउने गर्न थालेको छु । ऑखा अगाडि नभएपछि कम छोइने र चलाइने रहेछ । त्यसैले अहिले मेरो ध्येय मोबाइल सकेसम्म संगै नराख्ने रहेको छ । काम पर्दा चलाउने र सबै काम सकिएपछि मात्र आफूलाई मनपरेको कार्यक्रम हेर्ने । बरु सुन्ने कार्यक्रमहरु मोबाइलमा चलाउने गरेको छु । आफू र छोरीसंग खेल खेल्ने, चित्रकारिता सिक्ने, कथा पढ्ने, बोटविरुवा स्याहार्ने जस्ता कामहरु गर्न थालेकी छु । छोरीलाई पनि मोबाइलबाट अर्को तिर ध्यान मोड्न कोशिश गरिरहेकी छु । अर्को प्रमुख कुरा आफूलाई नै बेला बेला सम्झाइ रहेकी छु, मैले जे गर्छु मेरो छोरीले त्यहि नै सिक्छिन् त्यसैले मैले आफूलाई सुर्धान जरुरी छ ।
करीब तीन हप्ता भयो मैले सिरियल नहेरेको छैन र गेम पनि खेल्न कम खेलेको छु । अझै पूर्ण रुपले मोबाइल एडिक्सन छुटेको छैन । तर यो असम्भव भने छैन भन्ने भइसकेको । लत छुटाउन सकिन्छ तर त्यसको लागि दृढ हुन जरुरी छ । यसको लागि मेरो लागि मेरो बच्चा नै मेरो प्रेरणाको स्रोत हो ।
अहिलेलाई यत्ति नै पछिको कुरा पछि गरौला ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	Leaveacomment September 21, 2021 September 21, 2021 1 Minute
मेराे आफ्नाे वरिपरी दृष्टिविहीन काेहि छैनन् । न कुनै साथी, न कुनै परिवारका सदस्य, न त साथिहरूका आफन्त नै । त्यस्ता व्यक्तिहरूसंग कुनै प्रकारले संगत नभएकाे हुँदा उनिहरू कस्ता हाेलान् ? उनिहरूले कसरी जीवन व्यतित गर्लान्? भन्ने लाग्थ्याे र अझै पनि लाग्छ । सयद, अपाङ्गतामा सबैभन्दा गाह्राे यहि हाेला जस्ताे लाग्छ मलाई । रंगहरूले दिनरात छुट्टिने, रंगहरूले नै विधुवा र सधुवा छुट्टिने, रंगहरूले नै राजनैतिक पार्टीका विचारधारा छुट्टिने, रंगले नै कसैकाे समर्थन र बिराेध गर्ने, रंगले नै शन्ति र क्रान्ति छुट्टिने, रंगहरूले नै बाटाेका गाडीहरू कुद्ने र राेकिने अनि चित्रकारले रंगहरूले नै मनका भावनाहरू पाेख्ने गर्छन् । रंग नहुने हाे त जीवन कस्ताे हुन्छ हाेला ? दिन र रात नछुट्टिदा कस्ताे हुन्छ हाेला? यस्ता कुरा त जस्ले रंग देख्न सक्दैनन् उनीहरूलाई नै थाहा हाेला। देख्न सक्नेलाई त यस्ता कुरा साेच्ने फुर्सद पनि हुँदैन ।
दृष्टिविहीनसंग मेराे पहिलाे भेट सधै सम्झन लायक भयाे । उहाँहरूले मलाई संझनु हुन्छ/हुँदैन तर म उहाँहरूलाई सधै सम्झि रहन्छु । कहिलेकाहि उहाँहरूसंग लगातार सम्पर्कमा नबसेकाेमा दुःख पनि लाग्छ । सम्पर्कमा बसेकाे भए म उहाँहरूकाे केहि काममा आउथे कि जस्ताे पनि लाग्छ। तर जे हाेस् उहाँहरूसंग केहि सिक्ने र जान्ने माैका पाए मैले ।
कुरा सन् २00४/५ काे हाे, सोसल साइन्स बाहाले चलाउने गरेको इर्मसन कोर्सको हिउँदे सेसनको गर्दै थिए त्यस बखत । त्यो कोर्समा हरेक हप्ता एउटा विषयमा केन्द्रीत भएर पढाइ हुने गथ्र्यो । उदाहरणको लागि यो हप्ता “समाज र मिडिया” भयो भने अर्को हप्ता “समाज र शिक्षा”, “समाज र जातियता”, “समाज र लैंगिकता”, “समाज र विश्वव्यापिकरण” लगायत रिर्सच मेथेडोलजी र अन्य धेरै विषयहरु समेटिएर एउट गहकिलो प्याकेज तयार पारेर विद्यार्थीहरुलाई पढाइन्थ्यो । हरेक दिन कम्तिमा ५० पन्नाका लेख पढ्नु पर्ने र त्यसैको आधारमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सप्ताहको अन्तमा त्यस विषयमा केन्द्रीत रहेर एउटा लेख वा रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
रिसर्च रिपोट लेख्ने क्रममा सधै विषयको खॉचो पर्थ्यो । त्यसैले सधै आफ्नो वरपर के भइरहेको छ, के के कुरामा अध्ययन गर्न सकिन्छ भनेर चनाखो भएर समाजलाई अवलोकन गरीरहेकी हुन्थे । यसै क्रममा मेरो छिमेकमा एउटा घरमा दृष्टिविहीनहरुले डेरा गरी बसेको देखे । उनीहरु ७–८ जनाको समूहमा बसेका थिए । उनीहरुलाई बाटो हिड्दा सधै देखेपनि बोल्न ऑट गरेकी थिइन । तर अध्ययन गर्नुपर्ने राम्रो विषयको रुपमा उनीहरुलाई देखिरहेको थिए ।
रिपोर्ट बुझाउने अन्तिम दिन नजिक आइसकेकोले एक दिन आट गरेर उनीहरुको ढोका ढकढक्याए । सॉझपख भएकोले उहॉहरुको कोठमा पस्ने बेला बत्ति बालेर बसे । उहॉहरुलाई म किन उहॉहरुलाई भेट्न आएको भनेर आफ्नो उद्देश्य प्रष्ट गरे । त्यहॉ ४/५ जना दृष्टिविहीनहरु मात्र हुनुहुन्थ्यो । अरु चॉहि संगीत सिक्न जानुभएको रहेछ । उहॉहरुसंग पालैपालो अन्र्तवार्ता लिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसंग यसरी म पहिलोपल्ट कुरा गरिरहेकी थिए । उहॉहरुको कुरा सुनेर मलाई अचम्म लागिराखेको थियो ।
एकजना जन्मन्दै ऑखा नदेख्ने व्यक्तिले उहाँलाई सबै आफूजस्तै हुन्छ जस्तो लाथ्यो रे । सबैजना आफूजस्तै अन्धारोमा बस्ने, रंगहिन संसारमा बस्ने । जस्ले कहिले घामको उज्यालो देख्नुभएकाे थिएन, उहॉको लागि त सबै सधै अन्ध्यारो लाग्नु स्वभाविक नै थियो । ठूलाे हुँदै गएपछि मात्र आँखाले देख्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाएका । अर्का हुनुहुन्थ्यो नजिकबाट देख्ने तर टाडाको नदेख्ने । आंशिक दृष्टि गुमाएका । नजिकको मात्र देख्ने तर परको नदेख्नेलाई पनि दृष्टिविहीन नै भनिने रहेछ भन्ने पहिलो पटक सुने र थाहा पाए । उहाँ अन्य दृष्टिविहीनहरुका लागि ठूलो खम्बा हुनुहुन्दो रहेछ । अरुका लागि पढिदिने, लेखिदिने र बाटो हिड्न सघाउने । अर्काे हुनुहुन्थ्यो पहिले देख्ने तर उपचार नपाएर देख्न नसक्ने हुनुभएका । ती २०–२२ वर्षे टिटो बालखैमा अभावका कारण आँखा नदेख्ने हुनुभएका रहेछ । भाग्यले गर्दा कताकताबाट काठमाण्डौं आइपुग्नु भएको रहेछ र सहयोगी संस्थाका कारण संगीत सिक्ने, खाने–बस्ने अवसर पाउनु भएको रहेछ । त्यो फ्ल्याटमा सबै कहि न कहिबाट आएका युवायुवतीहरुको समूह संगीत सिक्ने र खाने–बस्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । तर उहॉहरु सधै संगीत अभ्यास गरीरहने हुँदा छिमेकीलाई हल्ला हुने र गुनासो गर्ने कारण एकै घरमा लामो समय बस्न नपाउने रहेछन् । २–४ महिनामा नै डेरा सरीराख्नु पर्ने उहॉहरुको बाध्यता रहेछ । दृष्टिविहीन हुन त्यस माथि पनि गरीब हुन उहाँहरुको चुनौति रहेछ । तर पनि आफूलाई मन परेको गीत–संगीत सिक्ने र त्यसमा रमाउने कुरालाई केहिले पनि छेक्न सकेन । जीवन संधर्षपूर्ण भए पनि उहॉहरु समूहिक रुपमा झुझिरहनु भएको थियो । उहॉहरुलाई देख्न नसक्ने ऑखाहरु केहि थिए भने सहयोगी हातहरु पनि त्यत्ति नै थिए ।
यस्तै तिता–मिठा कुराहरु गरेर म उहॉहरुसंग विदा मागेर, “अब घर जान्छु है, रात पर्न लाग्यो” भनेर उठ्न मात्र थालेको थिए, बत्ति गयो । म अन्धकारमा थिए । वरीपरि केहि देखिरहेको थिइन । उहॉहरु भने आफ्नो कुर्सीबाट उठेर खुरुखुरु बाहिर निस्कन थाल्नुभयो । म भने बल्ल बल्ल भित्ता छाम्दै करीडर सम्म पुगे र मूल ढोकाबाट अलिअलि उज्यालो छिरेको देखे र त्यसलाई पछ्याउ‘दै बाहिर निस्किए । त्यति बेला म उहॉहरुको संसारमा र उहॉहरु मेरो संसारमा पुगेको जस्तो लाग्यो । त्यो बेला म केहि बेर दृष्टिविहीन भएको आभास गरे ।
दृष्टविहीन भएर जीउनुकाे अर्थ जाे दृष्टविहीन छ उनैले मात्र भन्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूकाे जीवन कस्ताे हाेला भनेर बुझ्ने त्याे मेराे सानाे प्रयास थियाे । उहाँहरूका बारेमा धेरै व्यक्ति र संघसंस्थाहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएकाे छ र उहाँहरूका समस्याहरूलाई सम्बाेधन गर्ने काम पनि गरिराख्नु भएकाे छ । अझै धरै उहाँहरूलाई सहयाेगी हातहरू उठाेस् भन्ने चाहन्छु । बाहिर निस्कदा निस्कदै मैले “तपाईहरूलाई अरूले के सहयाेग गरिदियाेस् जस्ताे लाग्छ?” भनेर साेधेकी थिए । उहाँहरूले, “हामीलाई बाटाे काट्न गाह्राे हुन्छ, बाटाे काट्न सहयाेग गरिदिनुभए हुन्छ” भन्नुभएकाे थियाे ।
तपाईहरूले कहिकतै दृटिविहीनलाई भेट्नुभयाे र बाटाे काट्न लागेकाे देख्नुभयाे भने उहाँलाई बाटाे काट्न सघाउनुहाेस् है भन्ने मेराे अनुराेध छ ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	Leaveacomment June 25, 2021 June 25, 2021 1 Minute
मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ ?
मेरो सानो छोरी जहिले पनि प्रश्न गरीरहन्छे । उसको उमेर नै सबै कुराको बारेमा जान्ने/बुझ्ने हो । उसले बारम्बार सोध्ने प्रश्नमा “मान्छे मरेपछि कहॉ जान्छ?” भन्ने छ अहिले । यो प्रश्न जति सजिलो छ उत्तर त्यत्तिकै गाह्रो पनि । म “अ….” भन्दा नभन्दै “हेवेनमा जान्छ?” (अर्थात् स्वर्गमा जान्छ) अर्को प्रश्न थप्छिन् । यो उत्तर सजिलो छ, त्यसैले म “हो हेवेनमा जान्छ” भनिदिन्छु । भन्नलाई सजिलो उत्तर हो यो । उसले यो कुरा कार्टुन हेरेर थाहा पाएकि हुन् तर उसलाई यसमा पूर्ण विश्वास छैन त्यसैले बेलाबेलामा यहि प्रश्न गर्छे किनभने हेवेन कहॉ छ, कसरी जान सकिन्छ, के मा चढेर जाने, उसले बुझेकि छैन । त्यो त मलाई पनि थाहा छैन तर हेवेनमा जाने कथा रोचक छ ।
दार्शनिकहरुले धेरै छलफल गरेको विषय रहेछ मृत्यु र मृत्युपछि मान्छे कहॉ जान्छ भन्ने । दार्शनिकहरुले “मृत्यु एक मात्र सत्य हो” भनेका रहेछन् । हुन पनि हो, सत्य एक मात्र हुँदैन । एउटा ठॉउ, परिस्थिति र समयमा मानिएको सत्य अर्को ठॉउ, परिस्थिति र समयमा असत्य हुन सक्छ तर मुत्यु जुनसुकै परिस्थिति, समय र ठॉउमा सत्य नै हुन्छ । जो जन्मन्छ, त्यसको मृत्यु ढिलो–चाँडो अवश्य हुन्छ । तर यो सत्यलाई हामी बेलाबेला भुल्ने गर्छौ र सधै अमर रहन्छौ जस्तै गरेर व्यवहार गर्छौ । तर त्यो पनि कोरोना महामारीसंग जुधिरहन्दा मृत्युको तरवार अदृष्य रुपमा टाउको माथि झुन्डिरहेको पनि महसुस गर्छौ । यो भन्दा राम्रो उदाहरण अरु के होला र मृत्युसंगको साक्षात्कार भएको हाम्रो अनुभव?
मृत्यु भएपछि कहॉ जान्छ भन्ने प्रश्नमा उत्तर विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा दिएका छन् । सबै नपढे पनि जति पढेको र सुनेको छु त्यसका अनुसार मान्छेको मृत्युपछि उसको कामको मूल्यङ्कन गरेर स्वर्ग वा नर्कमा पठाउँछ रे । राम्रो काम गर्ने स्वर्गमा गएर सुखी जीवन व्यक्तित गर्छ र नराम्रो काम गर्नेहरु नर्कमा गएर दण्ड भोग्छन् रे । यो अवधारणा हिन्दु, ईसाई, बौद्ध र ईस्लाम जस्ता ठूला संख्याले मान्ने धर्महरुको छ । मेरो आफ्नो लिम्बू समुदायको भने अलिक फरक अवधारणा छ । स्वर्ग र नर्कको कुरा मुन्धुम (लिम्बूहरुको धर्मशास्त्र) आउँछ रे तर त्यो भन्दा बढी पितृहरू बस्ने लाेक वा पुर्खाकाे भूामीको कुरा बढी जनमानसले गर्ने गरेको सनेको छु । मेरो बाबाले भन्नु भए अनुसार आठौं पुस्ता सम्मका पूर्खा, सकेसम्म निकटतम पुस्ताका व्यक्ति (मृत्यु भैसकेका बुबा, आमा, बाजे, बोजु वा आफूलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने व्यक्ति) मृतकलाई लिन आउँछन् रे । मेरो बाजेको मृत्यु हुदा बाजेले “मलाई मेरो छोरी लिन आयो, अब म जान्छु” (बाजेको मृत्यु भएको छोरी) भन्नुभएको थियो रे । बाबाको माईजु मृत्युसैयामा बसेको बेला मेरो आमा र अन्य आफन्तहरु बसिरहेको बेला “मलाई मेरो आमा लिन आउनुभयो” भन्नु भएको थियो रे । यसरी लिन आएका पुर्खाले मृतकको आत्मालाई विभिन्न ठॉउ, डॉडा–खोला कटाएर पूर्खाको भूमी वा पूर्खाहरु बस्ने लोकमा लैजान्छन् रे । जसको अकाल मृत्यु हुन्छ, त्यो मान्छेको आत्मा भने सोगा–सुगुत (भूत–प्रेत) भएर पृथ्वीको वरीपरी घुमीरहन्छन् र जीवितहरुलाई दु:ख दिन्छन् रे । सायद उनीहरु अकस्मात मर्ने हुँदा पुर्खाहरु उनीहरुलाई पुर्खाको भूमी जाने बाटो देखाउन आउन भ्याउदैनन् होला, त्यसैले कता जाने बाटो नदेखेर मृत्युलोकमा भट्किरहन्छन् । त्यसैले आत्महत्या र हत्या जस्ता कार्य नगर्नु भन्छन् ।
फाेटाे: याेगेश राजद्वारा लिखित पुस्तक “संन्ध्या संरचना: हिन्दूनेवारहरूकाे मृत्युचेतना” काे कभर पेजबाट । फाटाेग्राफर : उषा तितिक्षु
बिसौं शताब्दीका महान वैज्ञानिक अर्लवट आइस्टाइन मान्छेको मृत्यु भएपछि पनि यहि संसारमा रहिरहन्छ तर उसलाई देख्न सकिन्न भन्ठान्थे रे भन्ने कुरा उनले आफ्नो मिल्ने साथीको मृत्यु पछि उनको श्रीमतीलाई चिठिमा लेखेका थिए रे । उनको विचारमा भूत, वर्त्तमान र भविष्यलाई समयकाे परिदृष्यमा (panaromic view of time) राखेर हेर्दा सबैजना जीवीत नै देखिन्छ भन्ने उनको मान्यता थियो रे । ( हेर्नुहाेस् https://youtu.be/ipiewC3QP-k ) आइस्टाइन भन्दा अघि र आइस्टाइन भन्दा पछिका वैज्ञानिकहरुले समानान्तर ब्रह्माण्ड (parallel universe), वैकल्पिक ब्रह्माण्ड (alternative universe) र टाइम ट्राभल (time travel) को खोजी गर्ने काम गरेका थिए र अझै पनि गरीरहेका छन् । तर समानान्तर ब्रह्माण्ड, वैकल्पिक ब्रह्माण्ड छ भन्ने कुरा हालसम्म पुष्ठि भएको छैन र टाइम ट्राभल गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । (विस्तृत जानकारीकाे लागि सुन्नुहाेस् मकियाे काकुकाे पुस्तक Physics of the Impossible https://youtu.be/Bffs7WszPEs )
दार्शनिक शुकरातले मान्छे मरेपछि ले मृत्युलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ भनेका थिए रे । पहिलो सपना नदेखिने निन्द्रा र दोस्रो परलोक जाने यात्रा । सपना नदेखिने निन्द्रा लाग्दा कुनै समस्या नै भएन । परलोक जाने यात्रा मृत्यु हो भने त्यसमा देह त्यग गरिन्छ आत्मा मात्र रहन्छ । त्यस पछि परलोकमा गएर विद्वानहरुसंग विचार–विमर्श गर्न सकिन्छ भन्ने उनको घारणा थियो । त्यसैले उनले मन–मस्तिष्कलाई जगेर्ना गर्नु, सुधार्नु र सभ्य बनाउनु जुन सधै (मरेपछि पनि) आफूसंग राख्न सकिन्छ भनेका थिए । त्यसले उनी मृत्युसंग कहिल्यै डराएनन् बरु मृत्युदण्ड दिदा हॉसीहॉसी विष सेवन गरेका थिए । मृत्यु सम्बन्धी यो अवधारणा पनि राम्रो छ किनभने मृत्युदेखि डर नमान्ने र शरीरलाई मात्र छाड्ने तर मन–मस्तिष्कलाई साथै लैजाने हुनाले जीवित हुँदा उच्च विचार राख्ने र ज्ञानको खोजी गर्ने तर्फ उन्मुख हुनु भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
पश्चिमी फिलोसफर मार्कोस एरेलियोसले हरेक दिन आफू जिउँदो भएकोमा खुशी हौं र त्यहि दिन आफ्नो अन्तिम दिन हो भनेर व्यवहार गर्थे रे । उनको संसारलाई दिएको ज्ञानमा यो महत्वपूर्ण छ किनभने मृत्यु कसैलाई निम्तो दिएर आउँदैन । कुनै पनि बेला मृत्यु हुनसक्छ, त्यसैले आफूले पाएको जीवन प्रति कृतज्ञ हाै, उत्तम जीवन जीउ, नैतिकवान बन, आफूले पाएका हरेक कुराहरु प्रति कृतज्ञ होउ भन्ने जस्ता उनको शिक्षा छ । (हेर्नुहाेस् मार्काेस एरेलियाेस् सम्बन्धि याे भिडियाे https://youtu.be/YAiTFZNORXY )
मरेपछि कहॉ जान्छ भन्ने कुरा त अन्य धेरै दार्शनिकहरुले गरेका छन् । धर्मशास्त्रमा पनि धेरै नै यसको व्याख्या पाइन्छ । अब यी विश्वदृष्टि (world view) कुन राम्राे लाग्छ त्यो हामीले छान्न सक्छौ जस्तो मलाई लाग्छ । हामी देखे अनुसार, भोगे अनुसार भन्ने हो भने मान्छे शुन्यबाट आएको थियो र मरेपछि शुन्यमै जान्छ भन्न सकिन्छ । जलायो भने खरानी हुन्छ, गाढ्याे भने कुहिएर माटो बन्छ । तसर्थ मान्छे जहॉबाट आयो त्यहि जान्छ – त्यो हो शुन्य । तर ठूला–ठूला धर्मले भनेको जस्तो स्वर्ग र नर्क जाने भन्दा पनि मलाई पूर्खाको भूमी जाने अवधारणा मन पर्‍यो किनभने पुर्खाको भूमीमा सबै आफ्ना–आफ्ना हुन्छन् । आफ्ना परीवारसंग मिलेर बस्नु पाउँदा रमाइलो नै हुन्छ । अब तपाईहरु पनि मरेपछि कता जाने आफै रोज्न सक्नुहुन्छ ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	7 Comments June 9, 2021 June 10, 2021 1 Minute
“गोबर गणेश” । हो “गोबर गणेश” मेरो बोलाउने नाम थियो, सानोमा । मेरो अरु पनि नामहरु थिए । प्यारो गरेर नानु, सृजु भन्नु हुन्थ्यो तर यो नाम चॉहि विशेष गरी मसंग दिक्क भएको बेलामा बेलाउनुहुन्थ्यो वा मलाई जिस्क्याउनु परे बोलाउनु हुन्थ्यो मेरो दाजु–दिदीहरुले । कुरा ढिलो बुझ्ने, ढिलो बोल्ने, जवाफ पनि ढिलै दिने, सकेसम्म बोल्ने भन्दा पनि टॉउको हल्लाएर जवाफ दिने, पढाएको पनि ढिलो बुझ्ने, पढ्न पनि ढिलो र लेख्न पनि ढिलो गर्ने । यस्तो नाम किन राख्नुभएको होला भनेर बुझ्दा, गणेश हिन्दू देवताहरुमा सबैभन्दा बुद्धीमान, विवेकि र ज्ञानीमा गनिने रहेछ । तर त्यो गणेश जब गोबर हुन्छ, त्यो गणेशमा भएका विषेशताहरुको ठिक बिपरीत हुन्छ । म पनि गणेशको विपरित रहेछु ।
किम्बदन्तीका अनुसार वेदव्यासले महाभारको कथा भन्ने र गणेशले लेख्ने काम गरेका थिए रे । गणेश अत्यन्तै चाँडो लेख्न सक्ने क्षमतावान थिए रे । महाभारत लेख्ने क्रममा उनको कलम भाचियो । कलम भाचिए पछि उनले आफ्नो दात भाँचेर लेखे रे । त्यसैले उनको प्रतिमाहरुमा भाचिएको दाँत देख्न सकिन्छ । वेदव्यासले कथा भन्दा भन्दै लेख्न सक्ने, त्यस्तो क्षमतावान थिए रे गणेश ।
Vedvyas and Ganesh writing Mahabharata (photo credit: timesnownews.com)
लेख्ने र पढ्न कुरा गर्ने हो भने अरुले दुई पेज पढीसक्दा म एक पेज मात्र पढ्न सक्छु । लेख्ने रफ्तार पनि त्यस्तै । सानोमा पनि त्यस्तौ थियो, अहिले पनि खासै धेरै परिवर्तन आएको छैन । मेरो समकक्षीहरुको तुलनामा म ढिलै छु । तर म आफू ढिलो वा सुस्त भएकोमा दु:खी थिइएन र छैन पनि । पहिले पहिले परिक्षामा सधै एक–दुई वटा प्रश्नको उत्तर दिन भ्याउदिन थिए । तर पछि गएर मैले थोरै लेखेर धेरै कुरा भन्ने तरिकाहरु सिक्दै गए । कलेजमा हुँदा दाजुको साथीले कुनै कुरा नबुझे त्यसमा धेरै ठाँउको नदुखाउनु बुझ्ने कुरा मात्र पढ्नु भन्नु भयो किनभने परिक्षामा सोधिने प्रश्नहरुमा विकल्प दिएको हुन्छ र उत्तर जानेको प्रश्न छनौट गरी उत्तर लेख्ने । त्यसपछि कलेजमा मैले आफूले बुझ्न नसक्ने टपिक पढ्दै पढिन र बुझ्न सक्ने टपिक मात्र पढ्ने गरे । त्यसैको आधारमा जॉच दिने गरे । तर आफूलाई मन परेको विषयमा सकेसम्म जान्ने र बुझ्ने कोशिश भने जारी राखेको छु । पढ्ने रफ्तार (स्पिड) बढाउनलाई स्पिड रिडिङका तरिकाहरु पनि सिक्दै छु, नोट लिन विभिन्न तरिकाहरु पनि सिक्दैछु र सम्झने तरिकाहरु पनि सिक्दैछु । मलाई लाग्थ्यो र अझै पनि लाग्छ सबैको आफ्नो आफ्नो सिक्ने रफ्तार हुन्छ । परिक्षामा म अब्बल पनि भइन तर म असफल पनि भइन । म सधै औसत (एभरेज) विद्यार्थी भए ।
म “गोबर गणेश” भए पनि मेरो दाजु अब्बल हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सर्टिफिकेट हेर्दा मलाई दंग लाग्छ, म्याथ र अप्सनल म्याथमा पूर्णङ्क, १०० मा १०० । अरु विषय पनि ८०/९० भन्दा कम छैन । तर राम्रो कुरा के भने हाम्रो बाबा–आमाले हामीलाइ कहिल्यै तुलना गर्नु भएन । मेरो भाई सानोमा स्कूल जान नमान्दा बाबा–आमाले उसलाई २ वर्षसम्म स्कूल पठाउनु भएन । उसको उमेरका केटाकेटीहरु स्कूल जादा उ घरमै खेलेर बस्थ्यो । उलाई घरमा देखेर सबैले किन स्कूल नपठाएको भनेर सोद्धा “यसलाई नमूनाको छोरा बनाउने, नपढाउने” भन्नुहुन्थ्यो बाबा । त्यसपछि उसको नाम “नमूनाको छोरा” भयो । बाबाको साथीहरुले उसलाई धेरै पछिसम्म “नमूनाको छोरा” भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो । पछि घरमा दाजु–दिदीहरुले कमिक्स र कथा किताब पढेको देखेर उसलाई पनि पढ्ने रहर जाग्यो । त्यसपछि उ एकैचोटी यू्.के.जी. मा भर्ना भयो तर पनि उसले स्कूलमा राम्रै गर्‍यो ।
अहिले हामी सबैले ढिलो–चाँडो मास्टर सक्यौ । आफ्नो इच्छा अनुससारको काम पनि गर्दैछौ । म “गोबर गणेश” भए पनि मेरो जीवन गोबर जस्तो छैन । बरु भित्रभित्र एकनासको राप दिएर खाना पकाउने गोबरको गुईठा जस्तो वा भनौ गोबरको मल जस्तो छ । पहिला भन्दा धेरै नै बोल्छु, ठाउ‘को हल्लाएर जवाफदिने तरिका धेरै पहिले छोडिसके, नयॉ कुरा सिक्न छाडेको छैन, आफूले जानेको र बुझेको अरुलाई सिकाउने पनि गरेको छु ।
मलाई “गोबर गणेश” भनेर बोलाएको कुरा त सबैले बिर्सि पनि सक्नुभयो होला किनभने यो शब्द नसुनेको छ युगौ भैसक्यो । तर आज कता कताबाट यो शब्द दिमागमा आयो र एउटा सानो अनुभव लेखिहाले ।
तपाईसंग पनि यस्ता तितामिठा अनुभवहरु होलान् । कसैलाई सुनाउन मन लागे म सुन्न तयार छु । कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	2 Comments May 25, 2021 May 25, 2021 1 Minute
बाेनसाई जस्ता आयाेगहरू
बाेनसाई यस्ताे कला हाे जस्ले रूख (तथा झाडी) लाई सानाे आकार दिएर आकर्षक बनाएर गमलामा हुर्काईन्छ । याे घर र काेठा सजाउनमा प्रयाेग गरिन्छ । बाेनसाई बनाउन रूख (वा झाडिदार विरूवा) लाई ठूलाे हुन नदिनकाे लागि त्यस्का जरा र हाँगाहरू समय समयमा काट-छाट गरिन्छ । हाँगाहरूलाई तारले बाधेर भनेजस्ताे आकारमा ढालिन्छ । माटाेमा राेप्दा चाँडै ठूलाे हुने भएकाेले यसलाई विशेष खाले माटाेमा राेपिन्छ जस्मा माटाे र मलकाे मात्रा एकदमै कम हुन्छ । त्यस माटाेमा विषेश खाले ज्वालामुखीबाट बनेकाे ढुंगाल वा गिट्टी, बालुवा र अन्य पानी साेस्ने वस्तुहरूकाे प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
बाेनसाई एकदमै आकर्षक देखिन्छन् । बाेनसाई बनाउने कला पारंगत हुन धेरै वर्ष लाग्छ । त्यसैगरि राम्राे र आकर्षक बाेनसाई बनाउन पनि धेरै समय लाग्छ । राम्रा बाेनसाईहरूकाे प्रर्दशनी पनि गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा पनि यस्ता बाेनसाई रूपी संवैधानिक आयाेगहरू थुप्रै छन् । देख्दा अत्यन्तै आकर्षक छन् तर फैलनलाई न त जरा छ न त हाँगा नै । सानाे गमलामा सजिएकाे सानाे र सुन्दर बाेनसाई ।
नेपालका संवैधानिक आयाेगहरूका केहि नामावली
१. राष्ट्रिय महिला आयाेग
२. राष्ट्रिय दलित आयाेग
३. राष्ट्रिय समावेशी आयाेग
४. आदिवासी जनजाति आयाेग
५. मधेसी आयाेग
६. थारू आयाेग
७. मुस्लिम आयाेग
८. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्राेत तथा वित्तीय आयाेग
९. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेग
(सबै आयाेगहरूका नाम नलेखेकाेमा माफ गर्नुहाेला )
तपाईहरूलाई यी बाेनसाईहरू कस्ताे लाग्छन् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहाेला ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	Leaveacomment May 18, 2021 May 18, 2021 1 Minute
मन्टेश्वरी पढ्दै आमा
उताबाट (मोबाइलको स्क्रिनबाट) प्रश्न आउँछ, “नेपाली व्यन्जनवर्णमा कतिवटा अक्षर छन् भनिस्यो त ?” हतार हतार नेपाली किताबको वर्णमालामा गनेर म उता नसुन्ने गरी छोरीलाई ईसाराले “३५” भन्छु । छोरी पनि जाने जत्तिकै गरेर “३५ म्याम” भन्छिन् । म्याम भनेको मलाई मन पर्छ । पहिले पहिले गुरुआमा, त्यसपछि मिस र अहिले म्याम हुनुभएको छ शिक्षिकाहरु । बोल्नलाई सजिलो र सबैलाई समान र सम्मान व्यक्त हुने । जिब्रो बटारेर “गुरुआमा” भन्नु भन्दा त “म्याम” नै राम्रो । आफू स्कूल पढ्दा पिरियडै पिच्छे लेग्रो तानेर “गुरुआमा…. नमस्ते…” भन्थ्यौ । “म्याम” भन्दा केटाकेटीहरुले लेग्रो तान्नै पाउँदैनन् ।
जति छोरीको पढाई बढ्दै जाँन्दैछ उत्ति नै मेरो पनि । कहिले काहि मैले स्कूल पढ्दै पढिन कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ । “क देखि ज्ञ सम्म भनिस्यो त बेबी” भन्ने प्रश्न उताबाट आउँदा म पनि छोरीसंगै भन्न थाल्छु (मोबाइलमा नदेखिने गरी) । क देखि ज्ञ सम्म पुग्दा चार ठाउँमा अड्किन्छु । ञ पछि के आउँछ रे? भन्दै । नेपाली बच्चाका लागि त गाह्रै छ तर मेरो लागि पनि सजिलो छैन । बच्चाको त के कुरा गर्नु ऋ लेख्न मेरै पनि पसिना छुट्छ । तर पनि लेख्न सिकाउनै पर्‍यो ।
बल्ल बल्ल छोरीलाई गृहकार्य गराएर पठायो, उताबाट “र मा ह्रस्व उकार” लेखेको मिलेन भनेर “रि–डु” (फेरी गर) भनि पठाउनु हुन्छ । आमाले नै ह्रस्व–दीर्घ नजानेपछि छोरीको त गल्ति हुने नै भयो । किनभने मेरो लागि “रु” एउँटै मात्र छ । अहिले सम्म त्यहि एउटै खाले “रु” ले काम चलिराखेको पनि छ । त्यसैले त्यसलाई ध्यानै दिएको थिइन । तर मन्टेश्वरीमा यस्तो हुँदैन, शुद्ध त लेख्नै पर्छ । अब यो “रि–डु” आमाले गर्ने कि छोरीले? मरेर चार घण्टा पछि लागेर लेखाएको होमवर्क “रि–डु” आउँदा त, अब कसरी फेरी गराउने परेन फसाद । अब यस्ता “रि–डु” आउनु अगावै आमाले ह्रस्व–दीर्घ जस्ता नेपाली मात्राहरु कसरी लाग्छन् भन्ने सिक्नै पर्ने भयो ।
नेपाली त आफ्नै भाषा हो र त यस्तो गाह्रो छ । अंग्रेजी भाषा त अर्काको स्वत गाह्रो हुने नै भयो । छोरीले मन्टेश्वरी जान थालेपछि बल्ल नर्सरी राइमले के भनेको बुझ्दैछु । पहिले त “बा बा हियर, बा बा दियर” भनेको सुन्थे, अहिले थाहा पाउँदैछु भेडा कराएको रहेछ । फूल, तरकारी, फलफूल र जनावरका नामहरु पनि अहिले थाहा पाउँदैछु । यो चाहि म्याहरुले पढाएको भन्दा पनि यूट्युव (youtube) स्कूलबाट सिकेको । यूट्युव स्कूले भन्टालाई एगप्लान्ट (eggplant), नेपाली सुन्तलालाई टेन्जरीन (tangerine), विदेशी ठूलो खाले सुन्तलालाई अरेन्ज (orange), साना कागतीलाई लाईम (lime), ठूलो कागतीलाई लेमन (lemon) भन्छ । त्यस्तै पनि रहेछ तर यी कुरा म्यामहरुले सिकाउने पठ्यक्रममा छैन । त्यसैले छोरी र म दुवै दुविधामा छौ, के भन्नुपर्छ भनेर । अंग्रेजी बोल्ने देशकाले भनेका मान्ने कि आफ्नै म्यामले भनेको मान्ने । आफ्नै म्यामले भनेको नमाने फेरी “रि–डु” आउँला, मान्नै पर्‍यो ।
मन्टेश्वरीमा बोलिने भाषा मलाई रमाइलो लाग्छ । बच्चाहरुलाई अत्यन्त सम्मानजनक बोलि बोलिने रहेछ । “तपाई” पनि होइन, राजकिय भाषा “बक्स्योस्” नै बोलिने रहेछ । “यस्तो भनिस्योस् त बेबी” भन्दा त मेरो आफ्नै बेबी पनि “रोयल–बेबी” भएछ जस्तो लाग्ने । राजतन्त्रत त नेपालबाट सकियो तर राजकीय भाषा मोह यथावत रहेछ । हुन त उहाँहरुलाई पनि अर्काको बच्चालाई किन रोयल–बेबी बनाउन रहर छ होला र? “धेरै हल्ला नगर्, अहिले पाँच औलाको छाप बसाइदिन्छु” भन्नु मन लाग्दो हो, हाम्रो पालामा जस्तो, तर मिलेन । गागिरको सवाल छ । त्यहि जागिर कै सवाल कै कारण दिनमा एक घण्टा चिरिबिरी कराउने चराहरु जस्ता बच्चाहरुलाई … म मा ृ कार (ऋकार) लगाई मृग, क मा हलन्त लगाएर क् र आधा क् लेखिस्योस् है … भनेर पढाउनु हुन्छ । केटाकेटीहरु “हस् म्याम” भनेर चिरबिराउँछन् । म आमा आधा अक्षर, हलन्त, रेफ, रसंग जोडिएर आउने (हाम्रा, राम्रा, राष्ट्र) शब्दहरुको नियम के हो र यसबारे बच्चाहरुलाई कसरी बुझाउने ? पहिले पढेको त सबै पोलेर खाएछु, अब फेरी पढ्नै पर्‍यो ।
मन्टेश्वरीमा पढ्दा अर्को रमाइलो कुरा के भने प्रशस्तै प्रोजेक्ट वर्क गर्न पाइन्छ । प्रोजेक्ट वर्कमा नक्सा बनाउने, नक्सा टाँस्ने, लेख्ने, कागज काटेर टास्ने यावत् कामकुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । स्कूल लाग्ने भए हस्याङ–फस्याङ गर्दै स्टेसनरी तिर चित्र किन्न दौडनु पथ्र्यो । अहिले विस्तारै पठाउँदा पनि हुन्छ तर पनि प्रोजेक्ट वर्क बच्चाले भन्दा आमाले नै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । आमाहरु घरमा फुर्सदमा बसेका हुन्छन् भन्ने थाहा पाएरै होला उहाँहरुले हामीलाई काम दिनुभएको ।
मैले पढाई सुरु गर्दा (यो चाँहि गाउँको कुरा हो) केटाकेटीहरुलाई भूईमा चटाइ राखेर बसाइन्थ्यो । डेक्समा धूलो राखेको हुन्थ्यो अनि त्यो धूलोमा हातले अथवा खरी ढुंगाले लेख्न लगाउनु हुन्थ्यो गुरुबा/गुरुआमाले । अहिले मन्टेश्वरी टेक्निकमा बच्चालाई कलम दिन अघि अक्षर कसरी बग्छ/घुम्छ त्यसबारे ज्ञान दिनु, बालुवामा हात घुमाउन सिकाउनु र शब्दहरुका अवधारणा (concept) बुझाउनु अनि मात्र पेन्सिल दिनु भन्दा रहेछन् यूट्युव स्कूलका मोन्टेश्वरी विज्ञहरुले । हाम्रो मन्टेश्वरीमा बच्चाहरु फोहर हुन्छन् भनेर होला सिधै कपी र पेन्सील दिएर भटाभट लेख्न लगाउनु भएको होला । एक घण्टाको मन्टेश्वरी जुम कक्षामा सर्रसरी पढाउने, प्रश्न सोध्ने र ४–५ पाना लेख्ने होमवर्क दिनुहुन्छ म्यामहरु । छोरी पट्टी मोवाई फर्काएर नदेख्ने गरी मोवाइल पछाडि बसेर म पनि मन्टेश्वरी पढ्छु । प्रश्नको उत्तर दिन सानो स्वरमा बोल्छु, छोरीले पनि बुझिहाल्छिन् र उत्तर दिईहाल्छिन् । म्यामहरुले पनि “स्यवास् बेबी” “भेरी गुड बेबी” भन्नुहुन्छ । म्यामहरुले पनि बेबीको आमाले बोलेको सुने पनि नसुने झै गर्नुहुन्छ होला किनभने बेबीको आमाले नजानेसम्म बेबीले जान्नेवाला छैन किनभने उहाँहरुलाई पनि थाहा छ बच्चालाई पढाउने काम त बेबीका आमाहरुले नै गरेका छन् भनेर ।
यी त भए मेरा आफ्ना अनुभवहरु । तपाईको अनुभव कस्तो छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला । धन्यवाद ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	2 Comments January 28, 2021 1 Minute
सन् २०२० ले सिकाएको पाठ
यो वर्ष (सन् २०२०), अन्य वर्षहरु भन्दा नितान्त फरक भयो । कोभिड–१९ सर्न सक्ने त्रास र लकडाउनको कारण मेरो/हाम्रो जीवनमा निकै असर पऱ्यो भन्दा फरक नहोला । कोरोना भाइरस जस्तो महामारीका कारण आफन्त गुमाउने, रोजगार र व्यवसाय गुमाउनेका लागि त यो वर्ष अत्यन्त कठिन पनि रह्यो । कोरोना भाइरस आफूलाई सर्न सक्छ भन्ने त्रास र त्यसलाई फैलन नदिन घरबाट ननिस्कने, आफन्त र साथीभाई भेट्न नजाने पनि गऱ्यौ र अझै पनि गरिरहेका छौ । कोरोना कै कारण हामीलाई मान्छेको छेऊछाऊ जान पनि डर लाग्ने बनाएको छ । यो वर्षलाई फर्केर हेर्दा, यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको स्वास्थ छौ र बाँचेका छौ भन्ने लाग्छ । यसमा नै सन्तुष्ट पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
यस वर्षलाई सिकाईहरुको वर्ष पनि भन्न सकिन्छ होला । मेरो विचारमा हाम्रो लागि यस वर्षका सिकाईहरु निम्न रहेका छन् ।
१. हामीले राम्ररी हात धुन सिक्यौ र हात धुने कुराहरुलाई हामीले आदत बनायौ : पहिला पहिला हामी हात धुदा साबुन नलगाउने, साबुन लगायौ भने पनि २० सेकेन्डसम्म नमिच्ने, बजारमा गयौ भने हात नधोई नै किनेका खानेकुरा (चटपटे, गोलगप्पा, फलफूल, बदम, आइस्क्रिम, चकलेट, विस्कुट, आदि) खाने गथ्यौ, रेष्टुरेन्टमा खान जान्दा पनि चम्चाले त खाने हो भनेर हात धुदैन थियौ । कतै गएर घर आएपछि हात धुने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन थियो । तर हात धुने काम अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा छ । खाना खान अघिपछि मात्र होइन, केहि नयाँ वस्तु समात्यौ भने पनि हामी हात धुन थालेका छौ । हात धुन पाइएन भने सेनिटाइजरले सफा गर्छौ । हात धुने आदत बनाएको कारण पनि कोरोना मात्र होइन हामी अन्य भाइरस र व्याक्टेरीयाबाट हुन सक्ने रोगबाट बचेका छौ । मेरो आफ्नो वरीपरि हेर्दा बच्चाहरुमा लाग्ने रुघा–खोकि र जाझापखाला कम लागेको देखेको छु । पहिले पहिले हरेक वर्ष हामी समाचारहरुमा दुरदराजका गाँउठाँउहरुमा झाडा–पखालाबाट बच्चाहरु ग्रसित भए, कति मरे भन्ने सुन्थ्यौ तर यो वर्ष त्यस्ता समाचार सुन्न परेको छैन ।
२. हामीले परम्परागत औषधीहरुलाई प्रयोगमा ल्यायौ : नेपाल जडीबुटीको खानी हो, यहाँ धेरै प्रकारका जडीबुटी पाइन्छ भन्ने किताब र पत्रपत्रिकामा पढ्का थियौ । तर जडीबुटी खासै खाने गरेका थिएनौ । मसलामा खाने भन्दा बढी खाइएको थिएन भन्दा फरक नपर्ला । तर यो वर्ष हामीले मसलामा खाने जडीबुटी देखि अन्य खाले जडिबटीहरु खायौ । बेसार पानी, ज्वानो पानी, कागती पानी, मह पानी, तुलसी पानी बाहेक यस पालि गुर्जो पानीले खुब ख्याति कमायो । गुर्जोसंगसगै विखमा, पिपला, हर्रा, वर्रा, पारिजात, आदि खाँदा राम्रो हुन्छ भनेर ती चिजहरु पनि गुर्जोमा मिसाएर खायौ । यस्ता परम्परागत औषधीहरुले पनि रोगसंग लड्न हामीलाई सहयोग गऱ्यो जस्तो लाग्छ ।
३. हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्यौ : यस वर्ष हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको विषेश ख्याल राख्यौ । त्यसको लागि गर्नुपर्ने न्यनतम सरसफाईका कामहरु गर्न थाल्यौ, त्यसलाई आदत बनायौं । सरसफाईमा विषेश ध्यान दियौ, खानापानको साथसाथै व्यायाम गर्ने काम पनि गऱ्यौ । घर सफा गर्दा भूई मात्र होइन ढोकाका कब्जा र रेलिङहरु पनि पुछ्न थाल्यौ । खानामा स्वास्थवर्धक खानाहरु खायौ जसमा ताजा फलफूल, तरकारी र तागततिलो झोलहरु बनाएर खान थाल्यौ । जंकफूड खान कम गऱ्यौ । ताजा र राम्रो खाना पकाउन सिक्यौं । लकडाउनमा घरमै बसेर पनि व्यायाम र योग गर्न थाल्यौ । आफ्नो रोग–प्रतिरोध क्षमता बढाउनु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्यो ।
४. परम्परागत रुपमा साँचेर (प्रिजभ) गरेर राख्ने खानेकुराहरुको महत्व बुझ्यौ : परम्परागत रुपमा साँचेर राख्ने खानेकुराहरुको जोहो हामीले यस वर्ष गऱ्यौ ।
(क) सुकेका (dried) खाद्धवस्तु जस्तै गेडागुडी, सुकाएको गोलभेडा, मुला, करेला, काउली, आदि धेरै समयसम्म राख्दा पनि नबिग्रने र स्वादिलो पनि हुने हुनाले यसको महत्व झनै धेरै भयो ।
(ख) धुवा लगाएर सुकाएका (smoked) खाद्धवस्तु जस्तै सुकुटी, सुकाएको माछा/मासु पनि धेरै समयसम्म टिक्ने । तिनलाई फ्रिजमा राख्नु नपर्ने र खादा पनि स्वादिलो हुने चिजहरु धेरै बने ।
(ग) प्रसोधित (processed) खाद्धवस्तुहरु जस्तो कि चिउरा, मुराई, मस्यौरा, याङ्वेन (एक प्रकारको झ्याउ), उसिनेर सुकाएको साग, सिस्नोको धुलो, सातु, पापड जस्ता खानेकुराहरु पनि पछि सम्म खानको लागि उपयुक्त हुने भएकोले यी चिजहरुको जाहो पनि गर्यौ ।
(घ) किण्वित अर्थात् अमिलो पारिएका (fermented) खाद्धवस्तुले पनि यस वर्ष महत्वपूर्ण स्थान पायो । कुन्द्रक, सिन्कि, मेसु (अमिलो तामा), अचार, किनामा, जाँड पहिले पनि नेपाली खाना भनेर चिनिन्थे तर यस वर्ष अनिकालले सताउछ कि, लामो समयसम्म लकडाउन भयो भने के खाने भन्ने पिर गरिरहन्दा पछि खान जोहो गरेका यस्ता खानेकुराले धेरै स्थान पायो । हामीले खायौ पनि र पछिका लागि जोहो पनि गऱ्यौ ।
यस्ता पछिसम्म खानमिल्ने गरी तयार पारेका खानेकुराका कारण लकडाउनको समयमा तरकारी र खाद्यवस्तु किन्न बारम्बार बजार जानु परेन । यस्ता खानेकुराले हाम्रो भन्सालाई स्वादिलो पनि बनायो ।
५. खेतिको महत्व बुझ्यौ : आफूले खानेकुरा आफैले उमार्न र फलाउन सके आत्मनिर्भर भइन्छ र खानको लागि अरुको मुख ताक्न पर्दैन भन्ने सिक्यौ । शहरमा बस्ने हामीहरुले पनि कौसीमा गमलाहरुमा कोसीखेति गर्न थाल्यौ । कौसीखेति गर्नेहरुले आफूले फलाएका स्वादिला र विषादियुक्त तरकारी र फलफूल खानथालेका छन् । यो कुरा सामाजिक संजालहरुमा हालिएका फोटोहरुलाई हेरेर नै थाहा हुन्छ ।
६. विरुवा रोप्न थाल्यौ : शहरमा बस्नेहरु अहिले कौसीखेति मात्र होइन कोठामा विरुवा रोप्न पनि थालेका छन् । वोटविरुवा स्याहार्ने कामले मान्छेलाई एक प्रकारको थेरापीको काम गर्ने, घर/कोठा पनि राम्रो देखिने र हावा पनि स्वच्छ बनाउने कारण यस प्रति युवाहरुको धेरै आर्कषण बढेको छ । अघिल्ला सालहरु भन्दा यो साल नर्सरी र गमला उद्योगहरुको राम्रो व्यापार भएको देखिन्छ । नर्सरीहरुले नयाँनयाँ विरुवाहरु विदेशबाट ल्याएर बेच्न थालेका छन् । घरमै बसेर सामाजिक संजाल मार्फत विरुवाहरु बेच्नेहरु पनि प्रशस्तै देखिएका छन् । समाजिक संजालमा विरुवा प्रेमिहरुको थुप्रै ग्रुपहरु पनि बनेको छ ।
७. हेण्डीक्राफ्ट इज व्याक (handicraft is back): लकडाउनको कारण सबैजना घरैबस्नु पऱ्यो । घरबस्दा दिक्क भएर मान्छेहरुले हस्तकला प्रति रुचि लिन थाले । क्रुसियो (crochet), निटिङ (knitting) वा स्वेटर बुन्ने, बुट्टा भर्ने (embroidery), मेक्रेमे (macrame) वा डोरी बुन्ने कला बनाउने जस्ता हस्तकला चल्ति भएको छ । क्रुसियो र निटिङ गरेका लुगाहरु २०२१ को ट्रेण्डमा आउने भविष्यवाणी फेसनिष्टा/फेसनविज्ञहरुले आफ्ना सामाजिक संजाल मार्फत गरिसकेका छन् । त्यसैगरी आफ्ना घर आगन विभिन्न किसिमका हस्तकलाहरुले सजाउन थालेका छन् ।
८. स्वरोजगारको बाटो राज्यौ : अर्काको काम गर्दा वा जागिर खान्दा कुन बेला काम खोसिने ठेगान नहुने भन्ने सिकाई यो माहामारी दिएको छ । माहामारीका कारण धेरैले काम-दाम दुवै गुमाए । यसरी काम–दाम गुमाएका धेरैजसो आफ्नै गाँउघर फर्किए । यसरी काम नपाएर र काम खोसिएर घर गएकाहरुले आफ्नै गाँउठाँउमा काम गरेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर सानोतिनो व्यवसाय र कृषिकार्य शुरु गरेको देखियो । शहरमा बस्नेहरुले पनि सानोतिनो अनलाई व्यवसायहरु शुरु गरे । अनलाईन व्यवसाय पनि प्राय: कृषिमा आधारित नै देखिन्छन्।
९.प्रविधिको उच्चतम प्रयोग : विकासन्मोख देश भएपनि यस साल यसले प्रविधिका एक फड्को माऱ्यो भन्न सकिन्छ । ठूलाठूला खर्च गरेर गरीने सेमिनार र वर्कसपहरु अहिले जुमबाट हुन थालेका छन् । खाने, बस्ने र यातायात खर्च यसले पुरै जोगाइदिएको छ । यसरी पनि कार्यक्रम गर्न सकिने रहेछ भन्ने आभाष दिएको छ ।
स्कूल र कलेजका विद्यार्थीहरुलार्य पनि अनलाइन लगायत टिभी र रेडियोबाट पनि पढाउन सकिन्छ भन्ने पाठ सिकायो । डिस्टेन्स् एजुकेसन ९मष्कतबलअभ भमगअबतष्यल० संभव छ र यो गर्न सकिन्छ भन्ने भएको छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने चुनौति अझै पनि छ ।
बैंकका सानातिना कारोवार, पानी–बत्तिका विल, स्कूल–कलेजका विल देखि लिएर खरिदारी पनि अनलाइनबाट गर्ने काम हामीले धेरै गऱ्यौ । पैसका कारोवार गर्ने मोवाइल ए्याप ९बउउ) हरु पनि चलाउन सिक्यौ/सिकायौ ।
१०. अफिस नगए पनि काम हुन्छ : अफिसमा काम गर्नेहरुलाई अफिसमा उपस्थित नभए पनि अफिसको काम गर्न सकिन्छ र हाकिमहरुलाई पनि काम गराउन सकिन्छ भन्ने थाहा भयो । राम्रो र प्रभावकारी काम गर्न, समयमा काम पुरा गर्न अफिस नै पुग्नु पर्दैन भन्ने पनि थाहा भयो होला कतिलाई (केहि अपवाद) ।
११. परिवारसंग समय बितायौ : लकडाउनले हामीलाई हाम्रो परिवारसंग समय विताउने अवसर दियो । बुबाआमासंग सुखदु:खका कुरा गर्न पाइयो । आफ्ना छोराछोरीको गतिविधि हेर्न पाइयो । उनीहरुका शिक्षकहरुको अनुहार मात्र होइन कस्तो पढाउछन् र कसरी पढाउछन् भन्ने पनि थाहा पायौ । कतिले छोराछोरीको बानी बिगार्यौ भने कतिले सुधार्यौ पनि होला । संगसंगै हाँस्यौ, खेल्यौ, रमायौ र झगडा पनि गर्यौ । यो समय सबैले सम्झने छौ ।
१२. आफन्त चिन्यौ : यो वर्ष हामीले आफ्ना साथीभाई, छिमेकी र आफन्तहरुलाई पनि चिन्यौ । रोगले सताएको बेला कत्तिले सघायो भने भने कति परपर भागे । पर जानेसंग सम्बन्ध बिग्रियो भने सहयोग गर्नेसंग सम्बन्ध बलियो भयो ।
१३. प्रकृतिलाई मान्छे चाहिन्दैन : कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरुको हिडढुल र चहलपहल कमी आए संगै प्रकृतिले आफ्नो रुप पनि फेर्न थालिन् । लोपोन्मुख वनस्पति र वन्यजन्तुहरु वर्षैदेखि बचाउनु पर्छ भनेर अनेकौ गरीएका प्रोजेक्टहरुले नगरेको काम यो वर्ष प्रकृतिले आफै गरिन् । मान्छेहरुको अतिक्रमणमा कमी आएपछि लोपोन्मुख वनस्पति र वन्यजन्तुहरुले वासस्थान पाए र उनीहरुको जनसंख्या पनि बढेर आयो । वातावरण प्रदुषणमा पनि कमी आयो । हावा स्वच्छ बन्यो । तुवालोले छोपिने हिमालहरु स्पष्ट देखिन थाले । यस बारे मिडियामा टन्नै देख्न/हेर्न/सुन्न पाइयो । कतिपय कुराहरु हामी आफैले देख्यौ पनि । प्रकृति आफै फस्टाउछ, आफै फूल्छ । प्रकृतिलाई मान्छे चाहिन्दैन तर मान्छेलाई प्रकृति नभई हुदैन भन्ने पनि बुझ्यौ ।
१४. मानवता मरेको छैन : लकडाउनमा काम नपाएर घर फर्केकाहरु हुन् या शहरमै खान नपाएर बसेका हुन् । ती कसैले नहेरेकाहरुलाई हेर्ने आँखाहरु र खाना खुवाउने धेरै हातहरु निस्किए । बाटोबाटै जुत्ता–चप्पल दिने, खाना खुवाउने, मास्क र पिपिई सितैमा बाढ्ने मनकारीहरु पनि देखिए । जहाँ नेता र कर्मचारीहरु जनताको नाममा अर्वौको घोटाला र कमीसन खाने देखिए भने त्यहि थोरैथोरै सहयोग जुटाएर हजारौलाई सहयोग गर्ने पनि देखिए । यस्ता मान्छेहरु देख्दा मानवता अझै पनि मरेको छैन भन्ने देखियो । यो देशमा राम्रो मान्छेहरु पनि छन् र यो देशको मुहार फेरिन पनि सक्छ भन्ने आशा देखाएको छ ।
१५. रोग लाग्दैमा मरिन्दैन : यस वर्ष हामीले रोग लाग्छ तर रोग लाग्दैमा मरीन्दैन भन्ने पनि महसुस ९चभबष्शिभ० गऱ्यौ । महामारीले धेरै मान्छेहरु विमारी भए । जो पहिला देखि नै बिमारी थिए र जस्को रोगप्रतिरोध क्षमता कमजोर थियो, उनीहरुलाई रोगले लग्यो । तर जस्को रोगप्रतिरोध क्षमता बलियो थियो, उसले रोगलाई जित्यो । नयाँ भाइरस, नयाँ रोग, महामारी भनेर पहिले जति आत्तियौ वर्षको अन्तसम्म हामी त्यो छटपटाईबाट मुक्त भएका छौ । हामीले रोग लाग्न नदिन आफूले जानेका र बुझेका काम गरिरहेका छौ र आफूलाई सकारात्मक राखेका छौ ।
हाम्रा यी सिकाईहरु जीवनभरका लागि हुनेछ । हामीले यो वर्ष २०२० लाई भूल्न खोजेर पनि भूल्न सक्दैनौ र भूल्न पनि हुँदैन । यी सिकाईहरु हाम्रो लागि सधै सबै अवस्थामा उपयोगी हुने छ । यसले हामीलाई यस्तो कठिन अवस्थामा संयम हुन सिकाएको छ । कठिन समय पनि बितेर जाने छ र राम्रा दिनहरु आउनेछन् भन्ने पनि सिकाएको छ । त्यसैले यो वर्ष कठिन वर्षका साथै सिकाईका वर्ष भनेर हामीले संझनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईलाई यो वर्ष कस्तो लाग्यो ? तपाईको सिकाई के कस्तो भयो, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	Leaveacomment January 5, 2021 1 Minute
हाम्रो समाजमा मान्छेको नाता–सम्बन्ध खास गरी दुई तरीकाले बन्छ । पहिलो रगतको नाताले (consanguinal) र दोस्रो कुटुम्बेरी (affinal) नाताले । भन्नुको मतलब जब मान्छे जन्मन्छ उसको उसका परिवार र वंशसंग रगतको नाता जोडिन्छ । जस्तो कि यदि कसैको छोरा/छोरी, दाजुभाई, दिदीबहिनी, बुबा/आमा, काका, फूपू, मामा, बाजे/बोजु बन्छ । यो रगतको नाताले बनेका सम्बन्धहरु हुन् । त्यसैगरी परिवारमा वैवाहिक सम्बन्ध पछि अन्य खाले सम्बन्धहरु बन्छन् जस्तो कि लोग्ने/स्वास्नी, सासु/ससुरा, सम्धी/सम्धीनी, फूपाजू, काकी, माइजू, भाउजू, बुहारी, ज्वाइ, भेनाजू, सोल्टी, सोल्टीनी, जेठानी, देउरानी, नन्द, सालो, साड्दाजु, साडुभाई, आदि इत्यादि । यस्ता सम्बन्धहरु कुटुम्बेरी सम्बन्धबाट बनेका हुन्छन् ।
यस्तै सम्बन्धहरु माध्ये एउटा गज्जबको नाता–सम्बन्ध हुन्छ जसमा जिस्कन वा ख्याल ठट्टा गर्नलाई छुट हुन्छ । त्यो पनि केटा र केटी बीच । साधारण तया हाम्रो समाजमा केटा र कटी बीचको ठट्टा गर्नेलाई राम्रो मानिन्दैन तर यो सम्बन्धमा ठट्टा गर्न छुट छ । उदाहरणको लागि सोल्टी (कतिले सोल्टा पनि भन्छन्) र सोल्टीनी बीचको सम्बन्ध, साली र भेना वा फूपाजू र भदैनी, देवार र भाउजूका नाता विषेश हुन्छन् । यी सम्बन्धमा केटा–केटी दुवैले एक–अर्कालाई जिस्काउनु सक्छन् । त्यसलाई समाजमा नराम्रो पनि मानिन्दैन । यस्तो ठट्टाको सम्बन्ध (joking relationship) ले समाजमा विषेश किसिमको महत्व राख्दछ । त्यो हो भविष्यमा वैवाहिक सम्बन्ध राख्न सकिने । सामान्यतया सोल्टी–सोल्टीनी बीच वैवाहिक सम्बन्ध गासिएको हामीले देखेका पनि छौ । साली–भेनाको त ठट्यौली गरेर “साली आधा घरवाली” भन्ने पनि प्रशस्तै सुनेका छौ । कतिपयलाई यसरी महिलालाई जिस्काएको मन पर्दैन र विरोध पनि गर्छन् । तर हाम्रो समाजमा साली विवाह गर्ने चलन व्याप्त छ । दिदीको अमायिक निधन भयो वा वालबच्चा नभएको खण्डमा बहिनीसंग विवाह गरीदिने प्रचलन छदै छ । दाजूको निधन भएपछि भाउजूसंग विवाह गर्ने चलन धेरै नदेखिए पनि यो चलन पनि छदै छ ।
ठट्टा गर्ने सम्बन्धलाई विवाह गर्न मिल्ने सम्बन्धको रुपमा हेर्ने हो भने हाम्रौ नेपालमा यस्ता समुदायहरु छन् जसमा फूपूचेला–मामाचेला बीच वैवाहिक सम्बन्ध गास्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि तामाङ, गुरुङ, थकाली, मगर, छन्त्याल, ठकुरी, आदि । यी समुदायमा फूपू–मामाका छोराछोरीहरुले एक–अर्कालाई हिन्दू समुदयामा र अन्य फूपूचेला–मामाचेला विवाह गर्न नमिल्ने समुदायमा जस्तो दाजुभाई/दिदीबहिनी भनी बोलाउँदैनन् । बरु सोल्टी–सोल्टीनी भन्छन् । दिदीबहिनी/दाजुभाई भनि बोलाउँदा विवाह गर्न नमिल्ने सम्बन्ध हुन्छ तर जब सोल्टी–सोल्टीनी भनिन्छ त्यो ठट्टाको सम्बन्ध हुन्छ । मगर समुदायमा फूपूको छोरा र मामाको छोरी विवाह गर्ने चलन छ । उनीहरु फूपूको छोरा आफूभन्दा ठूलो उमेरको छ भने भेनाजू वा जेठु भन्ने चलन छ । त्यसले उनीहरुलाई ठट्टाको सम्बन्धमा बस्न दिन्छ ।
अहिले फूपूचेला–मामाचेला विवाह गर्ने चलन कम हुँदै गएको छ । फूपू–मामाको छोराछोरीले एक–अर्कालाई दाजुभाई/दिदीबहिनी भनेर नै सम्बोधन पनि गर्न थालेका छन् । पुराना नाता–सम्बन्ध वा भनौ सम्बोधन गर्ने तरीकाहरुमा पनि परिवर्तन हुदै गहिरहेको छ ।
यसो हेर्दा खासै महत्व नदेखिने यो ठट्टाको सम्बन्धले कुटुम्बेरी सम्बन्धलाई अघि बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । यसले एक खाले कोर्टसिप (courtship) (अथवा विवाहको लागि भेटघाट गर्नु) सम्बन्धलाई बैधानिकता दिने र निरन्तरता पनि दिन्छ । यसले जीवनलाई रसिलो, हसिलो पनि बनाउँछ ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	Leaveacomment January 31, 2020 1 Minute
कल्चरल सक् (Cultural Shock)
जब तपाई कुनै नयाँ ठाउँ वा नयाँ समुदायलाई भेट्नुहुन्छ, उनीहहरुको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ र उनीहरुको अनौठो बानी–व्यवहार र परम्परा थाहा पाउदा कल्चरल (cultural shock) अथवा सांस्कृति झट्का लाग्छ । उदाहरणको लागि कुनै अमेरीकि वा युरोपेलि मुलकबाट पहिलो पटक दक्षिण एसिया घुम्न आयो भने जताततै STD लेखेको देखेर तर्सन्छ किनभने उसको लागि यो शब्दले sexually transmitted disease अर्थात यौन सम्बन्धबाट सर्ने रोग भन्ने बुझ्छ न कि टेलिफोन सेवा । कल्चरल सक् लाग्छ भनेर कतिपय यात्रीहरु आफू जाने ठाउँ र समुदायको बारेमा जानु अघि नै जानकारी लिने पनि गर्छन् ।
कल्चरल सक् सधै नयाँ ठाउँ र नयाँ समुदाय भेट्दा मात्रै लाग्छ भन्ने छैन । कल्चरल सक् हाम्रै वरीपरी आफ्नै छरछिमेकमा पनि लाग्छ कहिलेकाहि । यसै सन्दर्भमा भारतका प्रख्यात समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीले एम.एन. श्रीनिवासले यदि तिमिले ध्यान दियौ भने कल्चरल सक् आफ्नै घरपछाडि पनि लाग्न सक्छ भनेका छन् । यस्तै केहि अनुभव मेरो पनि छ ।
१. महिनावारी बार्ने चलन
भिन्न खाले समाजमा भिन्न खाले चलन हुन्छ नै । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । हामी राई–लिम्बूहरुले पनि महिनावारीमा बार्ने चलन छ तर त्यो देवता र पितृ पूजा गर्ने सन्दर्भमा मात्र लागू भएको देखेकि छु । अन्य कुराहरुमा त्यति बार्ने चलन छैन । तर यस बारेमा धेरै बोल्ने चलन पनि छैन । घरमा महिनावारी भए घरका महिलाहरुलाई मात्र थाहा हुने गर्छ अरुलाई भनिन्दैन ।
स्कुलमा छदा एउटा साथीको घरमा खेल्न जाँदा साथीले उसको घरमा बस्ने एक पुरुषलाई ठूलो स्वारले “मलाई नछुने भएको छ, परबाट जानुस्” भनेको सुन्दा म छक्कै परेको थिए । आफ्नो घरमा गुपगुप गर्ने तर बाहुनको घरमा हल्ला गरेको देखेर अचम्मै लागेको थियो । पछि थाहा भयो विषेश गरी जनाई लगाएको पुरुषलाई महिनावारी भएकी केटी/महिलाले छुन नहुने रहेछ । केहि कथम छुइहाले त्यो पुरुष अपवित्र हुने रहेछ भने केटी/महिला पापको भागिदार हुने भन्ने मान्यता रहेछ । हिन्दू धर्म अनुसार महिनावारी हुने केटी/महिला त्यस बखत अपवित्र हुने रहेछ ।
महिनावारी भएका महिलाले महिनावारी नभएका मान्छेलाई छुदा अपवित्र हुन्छ भन्ने कुरा त बुझे । पछि कलेज पुगेपछि त्यस्तैगरी अर्को बाहुन साथीको घरमा पुग्दा साथी महिनावारी भएकी थिइन् । अनि उनको घरमा अनौटो कुरा देखे । त्यसले मलाई अर्को कल्चरल सक् दियो । कोठामा पस्दा भुईमा कुल्चदा नछोइने तर कार्पेट/गलैचा राखेको ठाउँमा छोयो भने अपवित्र हुने । अनि कोठामा पस्दा उसको बहिनीले कार्पेट उठाइदियो र उ भित्तभित्ताबाट भित्र पस्यो । भुईमा टेक्दा नछोइने (अपवित्र) नहुने तर त्यहि भुईमा राखेको कार्पेट टेक्दा छोइने? यो पछाडिको तर्क मैले अहिले सम्म बुझेको छैन ।
कलेजमा हुँदा नै हो साथीहरुकहाँ धेरै जाने–आउने गर्ने । कलेज हुँदाकै कुरा हो । म एक जना नेवार साथीको घरमा गएको थिए । उनले “महिनावारी हुँदा खुट्टै चल्दैन, घिस्रेर हिड्छु” भनेको सुन्दा म छक्कै परे । कुरा के रहेछ भने उनको घरमा सबै जना काममा जाने । विहान काममा जान अघि घरकाले खाना दिएर गएपछि उनीहरु घर आएपछि मात्र खान पाउने रहेछ उसले । भान्समा पस्न मनाही भएपछि उसले दिनभरी पानीको भरमा बस्नुपर्ने किनकि खानलाई आफूसंग पैसा नहुने । सानैमा आमाको काख गुमाएकी ती साथी फिस्टा जस्तौ थिइन् । दिनभरी भोकै बसेपछि पोषण नपुग्ने नै भयो अनि खुट्टा कसरी चलोस् । उसको त्यो कुरा सुनेर मलाई अहिलेसम्म नी आङ्ग सिरिङ्ग भएर आउछ ।
पश्चिम नेपालको छाउपडीको कुरा पढिन्छ–सुनिन्छ तर काठमाण्डौको छाउ प्रथा पनि कम रहेनछ भन्ने लाग्छ । यी घटनाहरु धेरै अगाडिका पनि होइनन् । अहिले पनि काठमाण्डौमा हिन्दूहरुको छोरीको विहे गर्दा महिनावारी हुँदा सुत्नको लागि छुट्टै ओड्ने–ओछ्याउने दिन्छन् । त्यस बेला पूजाआजा मात्र होइन चुल्हा–चौकाबाट वर्जित गरिन्छ । एक प्रकारले त छोरीचेलिले भान्साको कामबाट छुट्टी त पाउछिन् तर जुन व्यवहार गरिन्छ त्यो अन्तन्त दु:खलाग्दो देखिन्छ । अरुले दिदा मात्र खान पाइने, भान्साकोटाको ढोकानेर बसेर खानुपर्ने, सबैसंग बसेर खान नपाउने जस्ता प्रचलनले महिनावारीको समयलाई झन् दु:खदायी बनाइदिन्छ ।
२. विधुवा धर्म
विधुवाले, विशेष गरी हिन्दू समुदायमा, सेतो लुगा लगाउँछन् । त्यो कुरा सानै देखि थाहा थियो । तर अन्य कुराहरु के गर्नु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा थाहा थिएन र अझै पनि राम्ररी थाहा छैन । कलेज पढ्ने समयमै साथीको घरमा हामी एक हुल साथीह भेट भएका थियौ । खाजा पकाएर खाउ भन्ने सल्लाह भयो । हामी सबै भान्सामा गयौ । चाउचाउ पकाउने तयारी भयो । म चुलेसी लिएर प्याज काट्न तयार भए । प्याज काट्नै लाग्दा साथीले (जसको घरमा हामी थियौ) मलाई रोक्यो र त्यो उसको ममिको चुलेसी हो नचलाउ भनिन् । मैले कुरा बुझिन तर चुलेसी चलाइन । उसले दिएको अर्को छुरीले प्याज काटे । मलाइ छक्क परेको देखेर अर्को साथीले विधुवाले लसुन–प्याज खादैनन्, त्यसैले नकाट्नु भनेको भनेर सम्झायो । मैले पनि बुझे झै गरे । तर “किन” भन्ने प्रश्न आइरहन्छ । पहिलो प्रश्न लसुन–प्याज जे काटेपनि धुएपछि सफा हुँदैन र? कसरी त्यो अपवित्र रहिरहन्छ ? अर्को प्रश्न लोग्नेको मृत्यु भएपछि स्वास्नीले मिठो–मसिनो किन खानु नहुने? विधवाले राम्रो लगाउनु मिठो खानु किन नहुने?
३. शुद्ध शाकाहारी खाना
मेरो दाईको धेरै साथीहरु तराईका शाहा छन् । एक पटक काम विशेषले विराटनगर पुग्दा एकजना दाईको साथी (जो शाहा नै हुन्) ले आफ्नो घरमा खाना खान बोलाउनु भयो । दाईकोमा गफगाफ गर्न हिसाबले चाडै नै उहाँकहाँ पुगे । दाईले मलाई खुवाउन भनेर मासु ल्याउनु भएको रहेछ । दाईसंग उनको भतिजहरु पनि बस्थे । दाई–भाउजू मांसहारी भए पनि उनको घरको अरु सदस्यहरु शाकाहारी थिए ।
हाम्रो घरमा शाकाहारी खाना बनाउनु परे मासु चलाएको डाडु–पन्यु र भाडावर्तन छुट्टै राखिन्छ – मिसाइन्दैन । त्यत्ति भए चोखो नितो भयो भन्ने मान्छौ । तर उहाँहरुको लागि त्यस्ते हुँदैन रहेछ । माछा–मासु पकाउने भाडाकुडा र चुल्हा समेत छुट्टै हुनपर्ने रहेछ । दाईको साथीको घरमा उहाँहरुले माछामासु पकाउनलाई छुट्टै (करीडरको एक कुनामा) ग्यास चुल्हा र भाडाकुडा राख्नु भएको रहेछ । मरमसला भने सधै प्रयोग गर्ने भान्साबाट लिनु भयो । त्यो मसला छोइन्छ कि भनेर एउटा भतिज मसला बोक्ने र अर्कोले ध्यानपूर्वक मसला भाउजूलाई दिने गथ्र्याे । अनि कहि झुकेर छोइन्छ कि भनी ती दुई केटाहरु खाना पाकुन्जेल रुङ्गेर बसे । उहाँहरुको घरमा माछामासु पकाएको चुल्हा र भाडाकुडा शाकाहारी खाना पकाइन्दैन । मांसहारी खाना पस्केको भाडाकुडा र थालहरु भान्सामा लान वर्जित हुने रहेछ । मासुले छुएको सबैकुरा अशुद्ध हुन्छ रे । यो तराईका धेरै जातिमा खासगरी झा, मिश्र र शाहाहरुले मान्ने रहेछन् । पहिलो पटक देख्दा र सुन्दा अचम्मै लागेको थियो । भाडाकुडामा र चुल्हा अशुद्ध हुने तर त्यो खाएको मान्छे चाहि किन अशुद्ध नहुने भन्ने प्रश्न पनि आयो । तर आफ्नो आफ्नो चलन र विश्वासको कुरा भनेर चुपचाप बसे ।
४. सोल्टी–सोल्टीनीको ठट्टा
अरुको चलन र विश्वास देखेर छक्क पर्नु त स्वभाविक हो तर कहिलेकाहि आफ्नै चलन देखे पनि कल्चरल सक्मा परिने रहेछ ।
सायद म १३–१४ वर्षको थिए होला । एक जना दिदीको विहेमा लोकन्दी (बेहुलीको साथी) जानु भनेर मलाई बोलाइयो । म पहिलो पटक लोकन्दी गएको त्यही हो । हामी ३–४ जना साना थियौ अनि अरु ठूला दिदीहरु, फूपूहरु , काकाहरु र काकीहरु थिए । बेहुलाको घरमा पुग्यौ । विहेको रीतहरु भए । राती सुत्ने बेलामा त काकाहरु सोल्टीनीहरुसंग घान नाच्न थाल्नुभयो, धान नाचिसकेपछि चिया पकाएर सोल्टिनीहरुले दिए काकाहरु गफिदै खानुभयो । उहाँहरु रातभरी जिस्किदै बस्नुभयो । वारीपारी बसेर उहाँहरु कुरागर्न थाल्नुभयो । काकाहरु सोल्टीनीहरुलाई ल्याईहाल्ने र सोल्टीनीहरु पनि आइहाल्ने जस्तो कुरा गर्ने । एकैछिनमा माया–पिरति बसेजस्तो कुरा गर्ने कस्तो होला भन्ने लाग्यो ।
म त उहाँहरुको चाला देखेर छक्कै परे अनि काकाहरुसंग रीस पनि उठ्यो । घरमा छोराछोरी भएका मान्छेहरु सोल्टीनीहरु देखेर उनीहरुलाई ल्याइहाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कस्तो मान्छे होला भनेर । घरमा आएपछि सबैलाई यो कुरा सुनाए पछि । त्यस्तो हो, छाडि दे भन्नुभयो आमाले । पछि कुरा बुझ्दै जाँन्दा त लिम्बू समुदायमा सोल्टी–सोल्टीनीको सम्बन्ध नै ख्याल–ठट्टा गर्ने रहेछ । यस्ता विहेबटुलमा सोल्टी–सोल्टीनीहरु जिस्कने त साधारण प्रचलन नै रहेछ । १५–२० जना लोकन्दी जाँन्दा सबैलाई सुताउने ठाउँपनि त नहुने रहेछ । हामी ८–१० जना केटीहरु एउटा कोठामा सुतेका थियौ भने केटाहरुलाई सुत्ने ठाउँ नै थिएन अनि यस्तो अवस्थामा रात बिताउनलाई घान नाच्ने र जिस्कदै बस्ने एउटा उपाय रहेछ ।
आफूलाई परेका यी कल्चरल सक् अहिले साधारण लागेपनि त्यो बेलामा यस्तो पनि हुन्छ र? किन यस्तो गरेको होला? भन्ने लागको थियो । श्रीनिवासले भनेको कुरा एकदमै सही लाग्छ । आफ्नै घरपछाडि कल्चरल सक् पाउछौ ध्यान दिएर मात्र हेर्नुपर्छ भनेको कुरा सहि हो । हाम्रो छरछिमेकमा, विभिन्न जात/जातिमा, विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता कयौ कल्चरल सक् दिने चलनहरु होलान् अझै हेर्न र भोग्न नै बाँकि छ ।
तपाईलाई मेरो कल्चरल सक्को कथा कस्तो लाग्यो ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला । तपाईको आफ्नो पनि कल्चरल सक्को कथा भए कमेन्ट बक्समा लेखेर सबैलाई सुनाउनु होला । धन्यवाद ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	Leaveacomment January 10, 2020 1 Minute
एनदर व्रिक इन दि वाल (another brick in the wall) लाई फर्केर हेर्दा
“एनदर व्रिक इन दि वाल” (another brick in the wall) अर्थात् पर्खालको अर्को ईट्टा, शिर्षकको यो गीतले सन् १९८० को दशकमा संसार हल्लाएको थियो । यो गीत पिङ्क फ्लोइड (Pink Floyd) व्याण्डले सन् १९७९ मा रिलिज गरेको थियो । यस गीतको रचना व्याण्डका सदस्य रोजर वाटर्सले गरेका हुन् । अमेरीका, युके लगायतका मुलुकमा यो गीत धेरै समयसम्म नं. १ भएर बज्यो । सन् १९८० को दशकमा यो गीत युवाहरुको मुखमा झुन्डिएको थियो ।
१९८० कै दशकमा म स्कूलमा छदा मेरो दाजुहरुले “we don’t need no education, we don’t need no thought control” (हामीलाई शिक्षा चाहिन्दैन, हामीलाई हाम्रो विचारमा लगाम नलगाउ) भनेर गाईरहनुहुन्थ्यो । म पनि संगसंगै गाउथे । त्यस बेला यस गीतको अर्थ मैले केवल हामीलाई शिक्षा चाहिन्दैन भन्ने सम्म मात्र बुझेको थिए । दाजुहरुलाई पढ्न मन नलागेर यो गीत गाएको होला भन्ने जस्तो लाथ्यो । झन् अन्तरामा “hey teacher, leave them kids alone” (ऐ शिक्षक, केटकेटिहरुलाई एक्लै छाडिदेऊ) भनेको सुन्दा त झन् रमाइलो लाथ्यो । म दाजुहरुसंगै टेपरिकर्डमा गीत सुन्ने गर्थे ।
अहिले फर्केर हेर्दा यो गीतको मर्म र सान्दर्भिकता उत्तिकै रहेको छ । ८० को दशकमा यो गीत जति सान्दर्भिक थियो आज ४० वर्ष पछि पनि यो गीत त्यत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ । हाम्रा शैशिक संस्थाहरुले बच्चाहरुको शिर्जनसिलतालाई उजागर गर्ने नभएर एकै खाले ज्ञान दिमागमा भरेर समान सोचाइ भएका कामदार उत्पादन गर्ने काम गरीरहेका छन् । त्यस्ता शिर्जनशिलतालाई नाश गर्ने एकै खाले सोच भएका कामदारहरु पैदा पर्ने शैक्षिक संस्था, शिक्षण पद्धति र शिक्षकहरु हामीलाई चाहिन्दैन भन्ने संन्देश यस गीतले दिन्छ ।
यो गीतले तिम्रो शिक्षा केटाकेटीको दिमागमा पर्खाल बनाउने ईट्टा हो । तिमि पनि पर्खाल बनाउने एउटा ईट्टा नै है भनी शिक्षकलाई भन्छ । मान्छेको स्वतन्तत्रालाई रोक्ने पर्खाल, विचारलाई रोक्ने पर्खाल, शिर्जशिलतालाई रोक्ने पर्खाल यहाँ शिक्षाले खडा गरेको छ र त्यो पर्खाल खडा गर्न शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका यस गीतले देखाएको छ । गीतमा शिक्षकले विद्याथीलाई तिमिले गरेको मिलेन फेरी गर भन्छ । त्यसैगरी केटीलाई नहल्ली बस् भन्छ । अनि खिर खानु छ भने मासु न खा, मासु खाइस् भने खिर खान पाउदैनस् पनि भन्छ । यसरी खानेकुरा देखि लिएर उठ्ने–बस्ने सम्मका कुराहरुमा शिक्षकले आफ्नो अधिनमा राख्छ बच्चाहरुलाई । उनीहरुले भने अनुसार भएन भने बच्चालाई सजाय दिन्छ ।
यस गीतका लेखक रोजर वाटर्सले यो गीतमा शिक्षण संस्थालाई उदाहरण मात्र बनाएको हो बच्चाहरुलाई सबै क्षेत्रबाट यस किसिमको दबाव पर्छ भन्नुहुन्छ । उनका अनुसार उनको समयमा किशोरावस्थामा टेक्दा केटाकेटीहलाई हरेक कुरामा बन्देज लगाइन्थ्यो, उनीहरुको इच्छालाई नकारीन्थ्यो त्यसैले यस्तो गीत लेखेको भन्छन् र अहिले त्यस्तो अवस्था नहोला भन्छन् ।(see Roger Water’s interview in this link https://www.youtube.com/watch?v=Si1718YxJC8) तर हामीकहाँ उनले भोगेको भन्दा फरक अवस्था अहिले पनि छैन । वयस्क अवस्थामा केटाकेटी बिग्रन्छन् भनी झन् धेरै कडीकडाई गर्ने गरेको मैले देखेको छु ।
अहिलेको हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पनि त त्यहि शैनिकलाई सिकाए जस्तो बुट–क्याम्प (boot-camp) तरीकाबाट नै चलेको छ । शिक्षकले भने अनुसार गर्नुपर्ने, नगरे सजाय भोग्नुपर्ने । बच्चालाई रटाएर जाच पास गराउने । उनीहले दिएको ग्रेड अनुसार बच्चा राम्रो या नराम्रो हुने । ग्रेड कम आए बच्चा जतिसुकै शिर्जनसिल भए पनि काम नलाग्ने हुने । त्यसै ग्रेडले बच्चा राम्रो या नराम्रो तुलना गर्ने कारण हरेक वर्ष १० कक्षाको सी (SEE) परिक्षाको नतिजा आउदा कोहि न कोहिले आत्महत्या गरेकै हुन्छन् र कति डिप्रेसनमा जान्छन् होल र आफ्नो वरीपरि पर्खाल बनाउलान् । तर सबै सी मा अब्बल आउनेहरुले जीवनमा अब्बल हुन्छन् भन्ने पनि छैन । उनीहरुको दिमागमा पनि बुट–क्याम्प शिक्षाको पर्खाल लागेकै हुन्छ जस्ले उनीहरुको जीन्दगीसंग जुझ्ने शीप सिकाएकै हुदैन । यस्तो खाले शिक्षाको दह्रो बिरोध गर्छ यो गीतले ।
त्यसैगरी यो गीतमा भनिएको पर्खाल एक प्रकारले सरकार पनि हो । शिक्षा मात्र होइन अन्य क्षेत्रहरु पनि छन् जस्ले जनताको वरीपरी पर्खाल लगाउने काम गर्छ । त्यसैले पनि यो गीत गोराहरुको शासनको बखत दक्षिण अफ्रिकामा रोक लगाइएको थियो । अहिले पनि जनताको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दै राज्यले पर्खालहरु लगाउने गर्छ र त्यस्को भत्र्सना यस गीतले गर्छ । त्यसैले यो गीतको सान्र्दभिकता रहिरहेको छ । अझै पनि यो गीत सुन्ने र मन पराउने जमात धेरै छ ।
यो गीत सुन्न र हेर्नलाई तलको link मा थिच्नुहोस् ।
तपाईलाई यो गीत कस्तो लाग्छ र यस गीतको बारेमा तपाईको बुझाई कस्तो रहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला । तपाईलाई यो लेख कस्तो लाग्यो त्यो पनि लेखिदिनुहोला । यो लेख मन परे लाईक र सेर पनि गर्नुहोला ।
Sirjana	गन्थन मन्थन	Leaveacomment January 3, 2020 January 9, 2020 1 Minute